Mianara anglisy na frantsay any Canada - Sekolin'ny fiteny BLI any Canada
Ny sekoly ao aminay
Programa amin'ny fiteny
Fandaharana ho an'ny fiteny roa
Anglisy & frantsay
Olon-dehibe sy olon-dehibe
TEFAQ Fanomanana fanadinana
Fandaharam-pianarana kilasy sy ambaratonga faharoa
Oniversite ny Nosy Prince Edward (UPEI)
Courses tsy miankina
TEF Canada sy TEFAQ
Aorian'ny hetsika Sekoly
FLAP | Lasy fahavaratra
Toby amin'ny teny an-tserasera
Misy fiteny roa ve?Halalino ny teny anglisy na frantsay
Halalino ny teny anglisy na frantsay any Canada ary ampidiro ao amin'ny fianakavian'i BLI.
Nanampy mpianatra an'arivony nianatra teny anglisy sy frantsay izahay tany Kanada.
Mianara anglisy na frantsay any CanadaMamandrika izao - Mianara any aoriana
Raha nanonofy momba ny fianarana any ivelany ianao dia izao no fotoana mety hanaovana izany.
BLI Canada dia manolotra fihenam-bidy mahavariana izay azonao atao manararaotra
raha te hianatra anglisy ianao na frantsay any Canada!
Fandriho ny dianao izao ary atombohy amin'ny daty ho avy, rehefa miverina amin'ny laoniny ny zava-drehetra.
Te hianatra avy amin'ny fampiononana ao an-tranonao ianao?Anglisy sy frantsay
Ny programa rehetra misy
Mianara anglisy na frantsay any Canada na dia tsy afaka eto aza ianao.
Makà fampianarana an-tserasera amin'ny teny anglisy na frantsay miaraka amin'ireo mpampianatra anay kanadianina
ao amin'ny kilasy an-tserasera marolafy maro ary hanatsara ny fahaizanao fiteny.
Azonao atao ny misafidy amin'ireo safidy roa azontsika:
Manomboka mianatra fianarana anglisy na frantsay an-tserasera ary vitao ny programa ao Canada
na mandehana fotsiny amin'ny safidy an-tserasera.
Fantaro ny haavon'ny anglisyFree
Na raha te hianatra Anglisy any Canada ianao fa tsy fantatrao hoe hafiriana no haharetanao
hianatra na hahay hiteny ilay fiteny, na raha variana fotsiny amin'ny ambaratonga anglisy ianao,
Azonao atao ny maka ny sedra maimaim-poana anglisy ary hitanao anio.
Manaova fitsapana ambaratonga
Te hahalala hoe manao ahoana ny haavon'ny teny frantsay?Free
Fantaro hoe manao ahoana ny haavon'ny teny frantsay amin'ny alàlan'ny fitsapana ny ambaratonga malalaka.
Na raha te hianatra teny frantsay any Canada ianao nefa tsy fantatrao hoe hafiriana no haharetanao
hianatra na hahay hiteny ilay fiteny, na raha manontany tena fotsiny ianao noho ny haavon'ny frantsay,
Azonao atao ny mandray ny fitsapana maimaimpoana frantsay ary mahita anio.
Anglisy sy fianarana teny anglisyMianara anglisy na frantsay ONLINE
Misoratra anarana anio sy
Mianara anglisy na frantsay avy amin'ny fiononan'ny tranonao. Raha tratry ny toe-javatra maneran-tany ianao izao dia azonao atao ny manomboka ny programa ao an-trano ary mamita azy any Canada raha vao tafaverina amin'ny laoniny ny zava-drehetra.
Raha tsy mikasa ny ho any Kanada ianao amin'ny ho avy dia afaka mandray soa avy amin'izany koa ianao.
Sekoly fiteny any KanadaMianara anglisy na frantsay any Canada
Raha tadiavinao ny sekoly tsara indrindra hianatra teny anglisy na frantsay any Kanada, dia ao no mahasolo toerana.
BLI Canada dia manana ny programa tadiavinao. Manolotra fampianarana anglisy sy frantsay any Montreal sy Quebec City ho an'ny rehetra izahay. Na inona na inona tanjonao dia hanampy anao hanatratra azy ao amin'ny BLI izahay.
BLI dia manome antoka fa hahazo ny valiny tadiavinao ianao. Hanampy anao hahatratra ny tanjonao izahay na inona na inona tanjonao. Na ny hianatra teny anglisy na frantsay amin'ny tanjona ankapobeny, akademika, orinasa, na fanadinana dia ny tanjonao dia hanampy anao ho tonga any izahay.
Izahay dia manana fandaharam-pianarana isan-karazany ho an'ny ambaratonga rehetra ao anaty fitantanana samihafa. Na tanora ianao na mpianatra mandroso izay maniry ny hahatanteraka ny fahaizanao amin'ny fiteny manokana dia hanohana anao ireo mpampianatra anay amin'ity sehatry ny fianarana ity.
Manana fandaharana mety aminao izahaySafidy fandaharana
Courses anglisy any Montréal na Internet. Mianara anglisy ary amboary ireo fahaizana fiteny efatra lehibe: ny miteny, ny famakiana, ny fihainoana ary ny fanoratana miaraka amin'ny fampiasana tsara ny rafi-pitsipi-pitenenana, voambolana ary phonetika.
KOKOA FIVAVAHANA ARA-DALANA
Fianarana frantsay any Montreal, Quebec City na an-tserasera. Ampiasao ny tenanao hiresaka amin'ny fomba tampoka sy voajanahary ary hianatra ny fomba hanehoana ny eritreritrao sy ny hevitrao amin'ny fahadiovana sy ny fahitsiana amin'ny toe-javatra samihafa.
SORATRA FOTOTRA ARAKA SAINY
Mianara anglisy na frantsay amin'ny Internet. Ny kilasy BLI Online dia ampianarin'ireo mpampianatra mahazatra antsika mivantana, mifantoka amin'ny fahaizana miresaka. Ny kilasy dia ampiantranoina amin'ny sehatra pedagogical anay.
Ny fampianarana fanomanana an'i IELTS dia hanome anao fampidirana ny firafitry ny fanadinana IELTS
Ny fizarana fanomanana BLI TEFaQ dia mifantoka amin'ny fanampiana anao amin'ny fampivoarana ireo fahaiza-manao ilainao mba hahombiazanao amin'ny maody am-bava sy fihainoana amin'ny fanadinana TEFaQ.
Ny fandaharana BLI Business English dia hampianatra ny fahaiza-manao mifantoka amin'ny asa. Rehefa tapitra ny fandaharana
Ny fandaharana BLI Business frantsay dia hampianatra anao ny fahaiza-manao mifantoka amin'ny asa. Rehefa tapitra ny fandaharana
Raha tsy manam-potoana hanaovan-tena amin'ny fandaharam-potoana amin'ny fotoana feno ianao dia afaka misoratra anarana amin'ny iray amin'ireo Courses anglisy sy frantsay atolotray amin'ny hariva ary manomboka manatsara ny fahaizanao fiteny anio.
BLI FLAP fandaharana amin'ny ririnina dia manolotra traikefa mahafinaritra any ivelany mampifangaro ny fianarana anglisy sy frantsay miaraka amin'ireo hetsika manaitra isan-karazany any anaty tontolo milamina sy miahy.
Fianarana fiteny roa
Ny fandaharam-pianarana BLI amin'ny fiteny roa dia manome anao fahafahana hianatra, handinika ary hanao fampiharana ny lafiny rehetra amin'ny fianarana fiteny, mandrakotra ny efatra
Ny fandaharana Inclusive rehetra ataontsika dia manolotra traikefa tsy manam-paharoa anao, ahafahanao manatsara ny fahaizanao amin'ny fiteny anglisy na frantsay.
Fampianarana faran'ny herinandro
Ny fandaharam-potoanan'ny faran'ny herinandro iray dia namboarina hifanaraka amin'ny fomba fiainanao sy ny filanao.
Ny fandaharan'asan'ny tarika BLI dia manolotra traikefa mahafinaritra any ampitan'ny fampifangaroana ny fianarana anglisy sy frantsay miaraka amin'ireo hetsika manaitra isan-karazany any anaty tontolo milamina sy miahy.
NY FAHAFATOKO ANAO AN-KANINAFandaharan-dàlana
Te-hianatra any Canada amin'ny institiora ambaratonga faharoa ve ianao ary ho lasa Mpikambana Kanadianina?
Manamora ny fizotrany io BLI io. Ny BLI Canada dia manana fifanarahana amina nomerao na institiota manolotra fampianarana ambaratonga faharoa. Raha maka ny programa alàlan'ny BLI ianao dia hahazo ny fampiofanana ilainao mba hahatratrarana ny haavon'ny fiteny izay ilaina hanombohana fandaharana toy izany, fa ny tena zava-dehibe dia ho vonona ianao hahita fahombiazana rehefa manomboka ny fianaranao aorian'ny fampianarana ianao.
Ny fandaharana amin'ny alàlan'ny BLI dia manampy anao hanatsara ny fahaizanao mamaky teny sy manoratra. Ankoatr'izay dia hianatra teknika fikarohana sy dinika izay ilaina ianao raha vao manomboka ny fianaranao any amin'ny iray amin'ireo sekoly mpiara-miasa.
Ny sekolyROA FAHAFAHANA ROA
Mianara anglisy na frantsay any Canada. Raha te hianatra teny frantsay ianao dia afaka misafidy ny sekoly fitenintsika any Montréal sy ny sekoly frantsay any Quebec City. Raha te hianatra anglisy ianao dia miandry anao i BLI Montréal
Manana fanontaniana ianao
momba ny BLI?
Alatsinainy - Zoma: 8:30 maraina - 5 hariva
Fepetra fisoratana anarana
Misoratra anarana an-tserasera
Fisoratana anarana hetsika
© 2020 BLi Canada. Zo rehetra voatokana.